Wax La Qaadan Karo Maha Ethiopia Oo Boqol Milyan ah In Ciidamada Bada Aanay Lahayn” General Berhanu Jula | Marsa News
Wax La Qaadan Karo Maha Ethiopia Oo Boqol Milyan ah In Ciidamada Bada Aanay Lahayn” General Berhanu Jula
November 9, 2018 - Written by editor marsan
Isagoo la hadlayay saxaafada dalka Itoobiya ayuu sheegay Janankan in Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed ay ka go’an tahay in Itoobiya ay dhisato ciidamo xoog leh oo kuwa badda ah kuna hubeysan qalab casri ah.
“Inkastoo aan lahayn dhul badda ku dhegen balse waxaan aad ugu dhow nahay Badda cas iyo Badweynta Hindiya, hadda waxaan aragnay in ay jiraan wadamo jecel in aan ka dhisano saldhigyo ciidamada Badda ah gudaha dalalka Somalia, Djibouti, Puntland iyo Eritrea saldhigana waxaan ka dhisi karnaa meel ka fog xeebta illaa 60km.”ayuu yidhi General Berhanu.
Waxaan kala tashaneynaa wadamada kale dhismaha iyo awooda uu ciidanku yeelanayo,wadamada kulaala Badda Cas iyo Badweynta Hindiya waxay siiyaan saldhigyo ciidamada badda ah dalal kale, sidaa darted waa go’aan istiraatiiji ah in ay Itoobiya ay sameysato ciidamo xoog leh oo kuwa badda ah. ayuu yidhi Jananka.
Arintan oo noqonaysa mid amakaag ku keentay shacbiga reer somaliland maadamo meesha uu ganeralku farta ku fiiqayaa ay tahay xeebta saylac oo iyadu ah halka ay sheegayaan in ay 60km u jirto.
Xukuumada somaliland ayaan wali ka hadlin arintan tiyoo aan meelna ayna xogta warkan lagaga xusin balse sida warka generalku uu sheegay uu kaliya ku xusay wadamada jabuuti, somaliya, erateriya, puntland, islamarkaana cabirka tilmaanta uu bixiyayna tahay xeebta bada saylac oo ah somaliland.